स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको पत्र: एक साताको अल्टिमेटम ! – yuwa Awaj
कार्तिक २४, २०७७ सोमबार 0
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा का’रबाही किन नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको छ । ढकाललाई एक साताभित्र जवाफ दिने अल्टिमेटम दिँदै सर्वोच्चले पत्र पठाएको छ।
अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा किन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई कारबाही नगर्ने आधार के हो एक साताभित्र त्यसको लिखित जवाफ माग गरेको हो । सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई नि:शुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेशवि’रुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।त्यही निर्णयवि’रुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरु’द्ध निवेदन दर्ता भएकोमा पछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाइएको थियो ।
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदा’लतको अव’हेलनाको आ’रोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो । अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।
उखुको भुक्तानी नदिने सञ्चालकलाई प’क्राउ गरिने: मन्त्री भट्ट
रासस , काठमाडौँ : आन्दो,लनरत उखु किसानले आफूहरुले पाउनुपर्ने भु’क्तानी दि’लाइदिन आ’ग्रह गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भु’क्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई प’क्राउ गरिने जनाउनुभएको छ ।
सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आज उखु किसान सं’घर्ष स’मिति, सर्लाहीका सं’रक्षक राकेशकुमार मिश्रको अ’गुवाइको टो’लीले मन्त्री भट्टलाई भेट गरी स्म’रणपत्र बुझाइएको थियो । किसानहरुको स्म’रणपत्र बु’झ्दै मन्त्री भट्टले उखु किसानका सम्पूर्ण स’मस्या स’माधान गर्ने आ’श्वासन दिनुभयो ।
मन्त्री भट्टले भन्नुभयो,“उखु किसानको भु’क्तानी नदिने चिनी मि’लका मालिकलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयमा प’रिपत्र गरिनेछ, जुन मिल ब’न्द भइसकेको छ, उसको जग्गा अथवा स’म्पत्तिलाई बिक्री गरेर भएपनि भुक्तानी गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछौं ।
”छठ पर्वभन्दा अघि किसानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए आगामी मङ्सिर २७ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर म’ण्डलामा हजारौं किसानहरू भेला भई आ’न्दोलन गर्ने समितिको चे’तावनी थियो ।
Prevसाढे दुई अर्बको अनियमिततामा मुछिए डा.खतिवडा…हेर्नुहोस् ।
Nextओलीलाई भोलिसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं – नेता खनाल !
धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (22)
२.	धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (22)
३.	वाइफाइ कमजोर छ ? अपनाउनुस् यी तरिका (15)
४.	काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि (14)
६.	लुम्बिनीमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप (12)
७.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (12)